गोबिन्दा र उनका भान्जा कृष्ण एक अर्काको अनुहार पनि किन हेर्न चाहन्नन् ? द कपिल शर्मा शो मा गोबिन्दा आउने भएपछि कृष्णले के गरे यस्तो ? – Sunaulo Nepal TV
गोबिन्दा र उनका भान्जा कृष्ण एक अर्काको अनुहार पनि किन हेर्न चाहन्नन् ? द कपिल शर्मा शो मा गोबिन्दा आउने भएपछि कृष्णले के गरे यस्तो ?
एजेन्सी । दर्शकको मनपर्ने कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो फेरी सुरु भएको छ । धेरै अतिथिहरु शो मा सहभागी हुन मन पराउँछन् । अब गोविन्दा एक पटक फेरी शो मा देखिनेछन्। गोविन्दा पहिले शो को एक हिस्सा भएका थिए । तर यो सिजन उनी शो मा पहिलो पटक देखिने छन्। अब यो सर्वविदित छ कि गोविन्दाको आफ्नो भतिजा कृष्ण अभिषेक संग बोलचाल समेत बन्द छ ।
आफ्ना मामा गोबिन्दा र माइजु समेत शो मा आउने जानकारी पाएपछि कृष्णले अनौठो निर्णय लिएका छन् । कृष्ण अभिषेकले त्यो दिनको शो नै छोड्ने भएका छन् । उनले गोबिन्दा आउने दिन शो वाट विदा लिने भएका छन् । मामा भान्जाबीच बोलचाल समेत बन्द भएकाले कृष्णले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।
अभिनेता एक साक्षात्कारका क्रममा यो विषयमा बोलेका छन् । उनले भने, विगत १५ दिन देखि, म मेरो फिल्म र द कपिल शर्मा शो को छायाँकनको काम मिलाइरहेको छु । फिल्मको छायांकन रायपुरमा र मुम्बईमा भएको छ। यस्तो अवस्थामा, मँ मेरो समय ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जब मलाई थाहा भयो कि गोविन्दा शो मा एक अतिथि को रूप मा आउँदैछन्, मैले त्यो भाग को छायाँकन नगर्ने निर्णय गरे। मलाई थाहा छ मामा माइजु म संग स्टेज साझा गर्न मन पराउँदैनन्।
भविष्यमा सँगै काम गर्ने कुनै इरादा छैन
कृष्णले अझै भने ‘यो मेरो पक्षबाट र उनको पक्ष बाट हुनेछ। यो एक कमेडी शो हो। मलाई थाहा छैन त्यहाँ बोलेका कुराहरुले फेरी के समस्या उत्पन्न हुन्छ ? त्यसैले म त्यस्तो अवस्था होस् भन्ने चाहन्न । मलाई थाहा छ जब गोविन्दा जी शो मा आएपछि, प्रशंसकहरुको अपेक्षाहरु म संग पनि बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै फरक माहौल नबनोस् त्यसैले मलाई लाग्यो कि यो शो को यस एपिसोड बाट बिदा लिनु राम्रो हुनेछ।’ वास्तव मा कृष्ण को विश्वास छ कि अब जब गोविन्दा भविष्य मा शो मा आउनेछन्, उनी शो बाट टाढा हुने निर्णय लिनेछन् ताकि कुनै बहस बाट बच्न सकियोस् ।
Previous घरको ऋण तिर्न माधव कतारमा, न घर रह्यो न परिवार
Next एमसिसी पास गराउन यति सम्म गर्दैछ सरकार, गृहमन्त्रालयको विज्ञप्ती हेर्नुस्,एमसीसी ठिक कि बेटिक ? कृपया आ -आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् !